Ny tany efitra an'ny Tatar avy amin'i Dino Buzzati - Ikkaro
firosoana >> boky >> Ilay Efitry ny Tartar avy amin'i Dino Buzzati
Ilay Efitry ny Tartar avy amin'i Dino Buzzati
Navoakako tao amin'ny tranomboky ity boky ity satria ny mpiara-miasa amiko no nanoro ahy izany. Izahay dia efa mahafantatra ny zavatra tianay ary rehefa misy zavatra atolony ahy amiko dia marina foana izy. Ny tany efitra an'ny Tartar no sangan'asa na magnum opus avy amin'i Dino Buzzati. Amin'ity fanontana Alianza Editorial ity dia nataon'i Esther Benítez.
Miaraka amin'ny fandikan-teny Espaniôla voalohany ao amin'ny Gadir Editorial tamin'ny 1985 dia nisy fampidiran'i Borges. Andao hojerentsika raha afaka mahita ny fanontana na ny prologue aho ary azoko vakiana fa tsy niaraka tamin'ilay iray avy tao amin'ny Editorial Alianza.
Ny lietnà Giovanni Drogo dia voatendry ao amin'ny Bastiani Fortress, fiarovana mafy, izay mametra ny tany efitra tsy maintsy hiarovany ny firenena amin'ny fanafihana, dia ny an'ny Tartars izay tsy tonga mihitsy.
Ny fanirian'ny mpikambana rehetra ao amin'ny trano mimanda dia ny hahatratra ny fahalehibiazana amin'ny ady, hiarovana ny tanindrazany, saingy i Bastiani dia sisin-tany maty manoloana ny tany efitra iray izay ahitantsika ny ain'ny lehilahy mandalo ao anatin'ny fanaony andavanandro. Tsy manana na inona na inona hatao ary tsy mila irina. Monotony. Ny antson'ny tany efitra, ny alahelo. mahazatra
Raha tsy maintsy nofaritako tamina teny tokana ity boky ity dia manjombona izany. Tsy hisalasala aho eo anelanelan'ny mahazatra sy ny alahelo, saingy tsy hiala amin'ny alahelo aho (satria Fasan'ny afomanga), na manirery izay hotendrena Orana mavo.
Ny fandehan'ny fotoana, tsy takatry ny saina, mamela ny fiainana handalo ho takalon'ny fanantenana fa tsy hanararaotra izany.
Tonga amin'ny fiafaran'ny fiainana ary mahatsapa ny lesoka.
Raha iray amin'ireo izay tia hetsika amin'ny tantara an-tsary ianao dia aza manandrana mamaky azy io, raha mila famakiana am-pifaliana ianao hampitraka ny fanahinao dia tsy manoro hevitra anao koa aho. Etsy ankilany, raha te hisaintsaina ireo zava-dehibe amin'ny fiainana ianao sy ny fotoana hiainana izany dia andramo izany.
Mahaliana izany satria ilay boky vantany vao vita dia namela ahy tsy hiraharaha firy. Saingy rehefa mandeha ny herinandro dia mihamafy ny fahatsapana ny fahalehibiazana rehefa miresaka momba azy ary miseho amin'ny maro amin'ireo fisaintsainako. Ary tena sarobidy amiko ireo boky ireo rehefa mandeha ny fotoana dia vao mainka tadidinao izy ireo ..
Ny zavatra soratako matetika dia ireo andinin-tsoratra masina ataon'izy ireo rehefa mandeha ny fotoana. Lohahevitra iray izay lasa miverimberina ao anatin'ny tombontsoako io. Raha tianao koa dia afaka mamaky ianao Ahoana ny fandehan'ny fotoana Orana mavo
Amin'ity boky ity dia tsy nahatohitra ny famoahana andalan-tsoratra roa izay tiako be momba ny fandehan'ny fotoana.
Ary mandritra izany fotoana izany, indrindra tamin'io alina io - oh, raha nahalala izy, angamba tsy hahatsapa ho te hatory izy - tamin'io alina io indrindra no nanomboka ny sidina tsy azo namboarina ho azy.
Mandra-pahatongan'izany dia nandroso tamin'ny taonan'ny tsy fitandremana tamin'ny fahatanorany voalohany izy, làlana iray izay toa tsy manam-petra amin'ny maha-zaza azy, ary mandalo tsikelikely ny taona ary misy dingana maivana, ka tsy misy mahatsikaritra ny fiaingany. Mandehandeha milamina, mijery manodidina ny fahalianana te hahafanta-javatra, tsy mila maika, tsy misy manenjika antsika avy any aoriana ary tsy misy miandry antsika, ary koa ny namana mandroso tsy misy tahotra, matetika mijanona amin'ny vazivazy. Avy any an-trano, eo am-baravarana, ireo zokiolona miarahaba fatratra, ary manao fihetsika maneho ny faravodilanitra amin'ny tsiky amin'ny faharanitan-tsaina; Noho izany ny fo dia manomboka mikapoka amin'ny filana mahery fo sy malemy paika, ny alin'ny zavatra mahafinaritra antenaina ho avy eo dia tsiro; Mbola mahita antsika ihany izy ireo, tsia, saingy azo antoka, azo antoka tanteraka, fa hahatratra azy ireo isika indray andro any.
Mbola be ve ny sisa? Tsia, ampy ny miampita an'io renirano io any ambany, mba hiampitana ireo havoana maitso ireo. Tsy efa tonga tampoka ve isika? Angamba tsy ireto hazo, tandavan'ala sy trano fotsy ireto no notadiavintsika? Mandritra ny fotoana fohy dia manome ny fiheverana fa eny ary ny iray te-hijanona. Aorian'izay dia maheno olona miteny ianao fa tsara kokoa ny mialoha, ary tohizina indray ny làlana nefa tsy mieritreritra.
Toy izany no manohy mandeha eo afovoan'ny fiandrasana am-pitokiana, ary lava sy milamina ny andro, mamirapiratra avo amin'ny lanitra ny masoandro ary hita fa tsy te hianjera miankandrefana velively izy.
Saingy amin'ny fotoana iray, saika voajanahary, dia miverina ianao ary mihitsoka eo aorianao ny vavahady iray ary manidy ny lalana miverina ianao. Avy eo ianao mahatsapa fa nisy niova, ny masoandro toa tsy mandeha intsony, fa mihetsika haingana, indrisy, zara raha misy fotoana hijerena azy io ary efa mirohotra mankany amin'ny sisin'ny faravodilanitra izy; Ny iray mahatsikaritra fa tsy mikatona intsony ireo rahona amin'ny rahona manga amin'ny lanitra, fa mandosira, mifampitoby, dia maika toy izany; mahatakatra fa mandalo ny fotoana ary ny dia tsy maintsy hamarana andro mangina iray ihany koa ny dia.
Amin'ny fotoana iray dia manidy vavahady mavesatra ao aorianay izy ireo, manidy azy ireo amin'ny hafainganam-pandrefesana izy ary tsy misy fotoana iverenana. Saingy natory i Giovanni Drogo tamin'io fotoana io, tsy nahalala, ary nitsiky tamin'ny nofiny toa ny zaza.
Andro vitsivitsy vao hahatsapa ny zava-nitranga ny mpanao trafika. Ho toy ny fifohazana izany avy eo. Hijery ny manodidina izy amin'ny tsy finoana; avy eo ianao dia handre tohatra dian-tongotra manaraka anao, ary ho eo alohanao ny hahatongavanao aloha. Ho henonao ny fitadiavan'ny fotoana mihetsiketsika amin'ny fiainana manontolo. Tsy hiseho eo am-baravarankely intsony ireo tarehimarika mitsiky, fa endrika tsy mihetsika sy tsy miraharaha. Ary raha manontany izy hoe ohatrinona ny lalana sisa tavela, dia hanondro ny faravodilanitra indray izy ireo, eny, nefa tsy misy hatsaram-panahy na fifaliana. Mandritra izany fotoana izany ireo ho sakaiza dia ho very tsy ho hitan'ny masony, ny sasany ho tavela any aoriana reraka; ny iray kosa efa nandositra mialoha; Izy io dia teboka kely fotsiny eo amin'ny faravodilanitra.
Ao ambadik'io renirano io dia hiteny ny olona - folo kilometatra hafa dia ho tonga ianao. Saingy tsy mifarana hatrizay, miha fohy ny andro ary mihakely ny mpiara-dia; Mampihifikifi-doha eo am-baravarankely ireo tarehimarika hatsatra tsy miraharaha.
Mandra-pahatongan'ny Drogo irery irery ary ny sisin'ny ranomasina manga midadasika, miloko firamainty, dia hita eo amin'ny faravodilanitra. Ankehitriny dia ho reraka izy, ny trano eny amoron-dalana dia saiky nakatona avokoa ny varavarankely ary olona vitsivitsy hita maso no hamaly azy amin'ny fihetsika tsy mampitony: ny tsara dia ao aoriany, any aoriana any aoriana, ary nandalo teo alohany izy nefa tsy fantany. Oh, tara loatra ny miverina, ao aoriany ny tabataban'ny vahoaka izay manaraka azy dia mihalalaka, atosiky ny fiheveran-diso ihany, nefa mbola tsy tazana eny amin'ny lalana lao fotsy.
Ary taorinan'ny faran'ny boky
Oh, raha mba nieritreritra momba izany izy tamin'ny alina voalohany, dia nandray ny tohatra tsirairay avy izy! Nahatsiaro reraka kely izy, marina izany, nanana peratra teo an-dohany izy ary tsy naniry ny lalao karatra mahazatra (teo aloha ihany koa, raha tsy izany, indraindray dia nilavo lefona mihazakazaka amin'ny tohatra izy noho ny tsy fahazoana aina indraindray). Tsy nanana ahiahy na kely aza izy fa tamin'iny alina iny dia tena nampalahelo azy, fa amin'ireo dingana ireo, tamin'io ora io dia nifarana ny fahatanorany, fa ny ampitso, tsy misy antony manokana intsony, tsy hiverina amin'ny rafitra taloha intsony izy , tsy ny ampitso, tsy any aoriana, tsy mbola nisy.
Sary vitsivitsy nalaiko tao amin'ireo boky. Na dia tsy misy resaka oasis aza na noho ny fametrahana dia toa tany efitra misy oase izy io. Nahafinaritra ahy ny nametraka iray. Saingy tsy nanararaotra aho ary tsy nametraka rameva ;-)
Ankehitriny raha manoratra ity famerenana ity aho ary mitady vaovao sasantsasany, hitako fa misy horonantsary, adaptation nataon'i Valerio Zurlini tamin'ny 1976, famokarana italianina-frantsay-alemanina io.
Hiezaka hitady azy aho ary raha hitako dia holazaiko anao eto ny fandehany.
Ny fiandrasana ireo barabarianina amin'ny loka Nobel amin'ny literatiora koa dia nosoratana John Maxwell Coetzee tamin'ny 1980 nahazo aingam-panahy avy amin'ny bokin'i Buzatti
Iza ireo Tartar?
Tsy afaka mamela ny boky isika raha tsy miresaka momba ny Tartars. Araka ny Wikipedia no anarana iraisana nomena ny vahoaka Tiorka avy any Eoropa Atsinanana sy Siberia. Tamin'ny voalohany dia nantsoina toy izany ny vahoaka Mongol tamin'ny taonjato fahatelo ambin'ny folo, saingy niafara tamin'ny ankapobeny ary niantso izay mpanafika Aziatika avy any Mongolia sy Azia Tartar andrefana.
Izy io dia lohahevitra iray izay tsy hanitatra amin'izao fotoana izao, fa hiala eto aho dia manoratra raha sendra taitra ny fahalianako ary miverina aminy aho.
Mandrehitra afo avy amin'i Jack London
Ithaca an'ny Cavafis
Zava-kanto nataon'i Neil Gaiman
Hevitra manokana an'izao tontolo izao nataon'i Alessandro Baricco
Sokajy boky, Fanamarihana sy fanamarihana Ticket navigation
Mizaha amin'ny proxy
2 Rehefa ela
3 Sarin'ny sary
4 Ilay sarimihetsika
5 Iza ireo Tartar?